आज शुक्रबारः के गर्दा मिल्छ लक्ष्मी माताको कृपा ? - संदेश पत्र
आज शुक्रबारः के गर्दा मिल्छ लक्ष्मी माताको कृपा ?
२०७७ भाद्र २६, शुक्रबार (२ हफ्ता अघि)
हिन्दू शास्त्रमा हरेक काम गर्दा समय बार र स्थानको विशेष महत्व हुने गर्दछ। कुन बार के काम गर्दा शुभ मिल्छ र के काम गर्दा अशुभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। शास्त्रका अनुसार शुक्रबारका दिन लक्ष्मीको पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। लक्ष्मीको पूजा गर्दा घरमा धन तथा समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ।
शुक्रग्रह श्रृंगारप्रिय मानिन्छ, यसैले रातमा सुगन्ध अर्थात् परफ्यूम लगाउनुस् । क्योरा र गुलाबको सुगन्ध तपाईँका लागि शुभ हुन्छ । साथै तपाईँको सिरानीको मुनि पनि सुगन्धित पदार्थ राख्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्दा तपाईँलाई आन्तरिक रुपमा सकारात्मक उर्जा आउँछ र परिवारमा पनि यसको असर पर्छ ।